TTSweet: စုံစီနဖာ အညွှန်း ...
Posted by T T Sweet at 12:33 AM
Moe Cho Thinn May 9, 2009 at 3:14 AM
ထမင်းပေါင်းက ရှယ်ပဲ။ စားချင်လိုက်တာ။
ရုပ်ရှင်လဲ ကြည့်လိုက်ပါအုံးမယ်။ ရီချင်နေလို့။ မျှဝေတာ ကျေးဇူးပါ။
ဝက်ဝံလေး May 9, 2009 at 3:35 AM
စားသွားးပါတယ် တီတီ ဆွီရေ craton ဆီမှာ တွေ့လို့ ဝင်လာလည်ဖြစ်တာ ပါ နောက်ကြုံရင် ဟင်းချက်နည်းလေး တွေ ပြောပြဦးနော် မီး က ဟင်းချက်ဝါသနာပါတယ် ပြီးရင် မီး ချက်တာတွေကို စားမရဘူးတဲ့ အဲလိုအားပေးကြတာ တီတီရေ အဟိ သွားဦးမယ် ဘလော့ဂ်တွေ လျှောက်လည်လိုက်ဦးမယ်နော် တာ့တာ
ကိုလူထွေး May 9, 2009 at 3:43 AM
အဲဒီကားကြည့်ပြီးသွားပြီ... အရမ်းရီရတယ်... တစ်ယောက်ကဆို တီတီဆွိနဲ့ တောင် တူသလားပဲ...
mae May 9, 2009 at 3:54 AM
တံတားပုံရိုက်ထားတာ လှတယ်မမ၊ စင်္ကာပူပြန်ရောက်ရင် နင်းကန်စားပြီး တံတားသွားလမ်းလျှောက်မယ်
mae May 9, 2009 at 5:27 AM
မမညွှန်းလို့ ဗွီဒီယိုကြည့်လိုက်တယ်၊ ရယ်လိုက်ရတာ၊ အပျိုကြီးတွေ ကြည့်ဆိုတော့ ... :P
မိုးကောင်းသူ May 9, 2009 at 9:26 PM
အကုန်လုံးကို စားချင်တယ်။ ကျွန်မက အစားကြီးတယ်နော်
သက်ဝေ May 10, 2009 at 12:53 AM
မနက်ဖြန် ဘာမှလုပ်စရာ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မရှိဘူးဆိုရင် အဲဒီရုပ်ရှင်လေး ကြည့်မယ်...
ပြီးရင် Henderson Waves မှာ လမ်းသွားလျှောက်မယ်...
Idea တွေအတွက် ကျေးဇူး...
ကိုပေါ May 10, 2009 at 3:20 AM
မုန်ညင်းစောချက်နည်းကို မဒမ်ပေါရဲ့ မိတ်ဆွေ မန္တလေးသူ MMY(95 EC) ဆီက နည်းရပြီး မဒမ်ပေါ စိတ်လိုလက်ရ ရှိတဲ့အခါ ချက်ကျွေးလို့ မကြာခဏ စားဖူးပါတယ်။ ချက်ရလွယ်ကူပြီး စားလို့လည်းအရမ်းကောင်းပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်များထံမှာ မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။ (ကျနော်တော့ ချက်နည်းမသိပါ။ စားနည်းပဲ သိပါတယ်။း-)
T T Sweet May 10, 2009 at 12:12 PM
ညလေးမြူးရေ။ မုန်ညင်းစောဘယ်လိုချက်ရမယ်မှန်း မသိလို့ုးတ်ခရောက်နေတုံး ကယ်တင်ရှင် ကိုပေါနဲ့တွေ့သွားတယ်။ အဲမှာ မဒမ်ပေါကိုသာ မေးပေတော့။ ကိုပေါရေ မုန်ညင်းစောချက်နည်းတင်ပေးပါဗျို့။ သများတို့ ချက်စားချင်လို့ပါ။
သယ်ရင်း မဝေ ...ညွှန်းတဲ့ သူ အားရအောင် အကုန်လျှောက်လုပ်တော့မယ်ပေါ့ ။ ညွှန်းရကျိုးနပ်ပါပေ့။
တခြားမန့်သွားတဲ့ ညလေးတွေ ကျေးဇူးနော်။
ကိုပေါ May 10, 2009 at 9:46 PM
အောက်ပါ မုန်ညင်းစော ချက်နည်းမှာ မဒမ်ပေါ၏ ကျောင်းနေဖက် မိတ်ဆွေ (မန္တလေးသူ) တဦး ပေးသော နည်းဖြစ်ပါသည်။ ရှမ်းပြည်ဖက်မှာ ချက်သည့်နည်းဖြင့် တူချင်မျှ တူပါလိမ့်မည်။ အချို့ ဆီမသတ်လိုသူများမှာ လုံးချက်သည့်နည်းဖြင့်လည်း ချက်ကြောင်း သိရပါသည်။
ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီ၊ ဂျင်းလက်တဆစ်ကို အရောင်တင်မှုန့်အနည်းငယ် နှင့်ဆီသတ်ပါ။ ဆီနည်းနည်းသာ ထည့်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၀က်နံရိုးမှ ဆီထွက်လာမည်ဖြစ်သောကြောင့်ပင်။
ဆီသတ်ပြီးလျှင် ၀က်နံရိုးများကို ဆီသပ်ထားသော အိုးကင်းထဲသို့ထည့်၍ မီးဖိုပေါ်တွင် ခဏမျှကြာအောင် မွှေပေးပါ။
ထန်းလျက် (သို့မဟုတ်) ကြံသကာ ကွမ်းသီးဝက်ခန့် ထည့်ပါ။ ပြီးလျှင် အပွင့်အ၀ါကလေးများပါသော (အင်န်တီယူစီတွင် ၀ယ်၍ရသည်) မုန်ညင်းရွက် လှီးဖြတ်ပြီးသားများကို ထည့်၍ နှံ့အောင် ရောသမမွှေပါ။ (ငရုပ်သီးနှစ်သက်သူများ ထည့်လိုပါက ငရုပ်သီးအစိမ်းတောင့်များကိုလည်း ဤအချိန်တွင် ထည့်နိုင်ကြောင်း သိရပါသည်။)
ပြီးလျှင် ရေအနည်းငယ်ထည့်၍ မီးဖိုပေါ်တွင် ဆူပွက်သည်အထိ တည်ပါ။ ပြီးလျှင် ဆား၊ အချိုမှုန့်၊ ငံပြာရည် လိုအပ်သလို ထည့်ပါ။ မန်ကျည်းရည် အနည်းငယ်ထည့်ပြီးလျှင် ရေကို မိမိနှစ်သက်သော ပမာဏခန့် ထပ်ထည့်၍ အတန်ကြာအောင် တည်ပါ။ ၀က်သားနူး၍ အနံ့သင်းလာပြီဆိုလျှင် အသင့်စားသုံးနိုင်သော မုန်ညင်းစောဟင်း တခွက် ဖြစ်လာပါလိမ့်မည်။
နိုင်းနိုင်းစနေ May 16, 2009 at 9:36 PM
အဲဒီကားကို မူဆယ်အသွားအပြန် နှစ်ခါတောင် ကြည့်လိုက်ရတယ်
မြန်မာကားထဲမှာ တော်တော်လေးကြိုက်မိတဲ့ ကားလေးပါ
အပျိုကြီးတွေအကြောင်းဆိုတော့ ပိုကြိုက်မိပါတယ် :P
တန်ခူး May 18, 2009 at 11:59 PM
သယ်ရင်းရေ…. ပျောက်တယ်နော်… ဟိုနေ့ ထဲက လာဖတ်တာ ကော်မန့် မန့် လို့ မရ ဖြစ်နေလို့ … အဲဒီကားကြည့်ပြီးပြီသိလား… စိုးမြတ်သူဇာကို အကြိုက်ဆုံးပဲ…. Botakက clementi က သိပ်မကောင်းဘူးသိလား… တခြားဆိုင်ခွဲတွေနဲ့ စာရင်လေ…henderson wave တော့ရောက်ဖူးသေးဘူး… မြန်မာပြည်က သူတွေ အလည်လာမှပဲ ရောက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်…
T T Sweet May 24, 2009 at 4:09 AM
မုန်ညင်းစောချက်နည်း လာရေးပေးသော ကိုပေါကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
သယ်ရင်းတန်ခူးရေ။ ခရီးထွက်နေလို့ပါ.တန်ခူးဆီလဲ လာလည်ပြီးပြီ ...